Somaliland: Deegaanka Hudusa oo Ardaydu ay Wax Ku Bartaan Geedaha Hoostooda – Goobjoog News
Dadka deegaanka Hudusa oo ka tirsan degmada Berbera ayaa ka cabanaaya dayac ka haysta adeegyada waxbarashada iyadoo ardayda deegaankaasi wax ku barata Geedaha hoostooda.
Ardayda dhigata waxbarashada aasaasiga ah ee ku nool magaalada Hudusa ayaa sannado badan waxay waxbarashadooda aasaasiga ah ku soo wadeen geedo hoostood oo ay wax ku bartaan, madaama dadka deegaanku u awoodi waayeen fasallo dhismo ah oo ay wax ku bartaan .
Guddoomiyaha Hudusa oo ka sheekeeyey baahida ay ardaydaasi u qabaan iney helaan goob u diyaarsan waxbarasho ayaa xusay in ardaydu ay waxbarashada fasax ka galaan mararka qaar bilo dhan gaar ahaan xilliyada roobabka, “ Waxaanu qabnaa baahiyo badan oo waad dareemi kartaa arday waqtigan jooga oo waliba ka war qaba dunidu halkay waxbarasho iyo horumar ka gaartay, dhawaan waxaanu galnay fasax dheer ka dib markii roobab deegaanka ka curteen illeen lama dhigan karo waxbarasho arday geed hoos fadhiyaa” ayuu yiri guddoomiyaha Hudusa Axmed Muxumed Saliim.
Ardaydan oo tiradoodu labo boqol ka badan tahay, ayaa waxay hoos fadhiyaan oo ay wax ku bartaan geed aan har badan lahayn, halkaasi ayeyna gabdho iyo wiilalba wax ku wada bartaan, waxayna mar ay la hadleen warbaahinta codsadeen in wax laga qabto baahidooda waxbarasho oo loo dhiso goob ay wax ku bartaan.
Macallimiinta wax ka dhigta geedkaasi hoostiisa ayaa sidoo kale waxay dhibaato ku tilmaameen xilliyada ay dabayluhu soo dhacaan iney hakad gasho waxbarashada, Macallin Axmed Cali ayaa yiri ” markaad cidlo fadhido wax kasta waa kugu caqabad markaasi dabaysha oo deegaankan aad uga dhacda ayaa caqabad nagu noqotay waqtiyo badan “.
Deegaankan baahida waxbarasho ka taagan tahay oo dhanka bari ka xiga magaalada Berbera 40 KM, ayaa magaalada Barbara tahay goobta ugu weyn ee dhaqaalaha Somaliland ka soo xaroodo waxyana dadka deegaanku arrintaasi ku xoojiyeen cabashadooda oo ay is xasuusiyeen.
Soo Gudbinta Liiska Magacyada Ergada Doorashooyinka Aqalka Hoose Oo Lagu Guul-dareystay